U20 - အကျဉ်းချုပ် - Meizu
ကျက်သရေရှိတင့်တယ်သည့် မျဉ်းကွေးထားသော စခရင်မျက်နှာပြင်
လက်ဗွေရာ အသိအမှတ်ပြုသည့်၊ ထို့ပြင် အလှအပ ကင်မရာ
8-core ပရိုဆက်ဆာ၊ ချောမွေ့သော တစ်ချိန်တည်းအလုပ်အများအပြား ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း
U20 အား 8-core ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြင့် ပါဝါပေးထားပြီး၊ RAM 3GB အထိ ပါဝင်မှုနှင့်အတူ ကြိမ်နှုန်း 1.8 GHz အထိ ရှိသည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များသည့် ဂိမ်းဆော့ကစားမှုများ နှင့် တစ်ချိန်တည်း အလုပ်အများပြား ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့အတွက်ပင်လျှင် ကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
5.5-inch HD မြင်ကွင်းပြည့်
U20 ၏ အပြည့်ဝ အလွှာပါးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည့် 5.5-inch 1080p မြင်ကွင်း သည် ရုပ်ပုံများအား ထင်ရှားရှင်းလင်းသည့် အရောင်များ၊ ထို့ပြင် အသေးစိတ် တစ်ခုချင်းစီ သစ်လွင်တောက်ပမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပေမည်။
U20 သည် ကောင်းမွန်လှသော အသွင်သဏ္ဍန်၊ ခံစားမှုတို့အတွက် အရည်အသွေး မြင့် ဖန်သားပြင် ပါဝင်မှုနှင့်အတူ ခိုင်မာသော သတ္ထုဖရိန်ဘောင်တစ်ခုအား ထည့်သွင်းထားပေသည်။
13-megapixel ကင်မရာ၊ ထူးခြားသည့် အလင်းလျော့ ဆောင်ရွက်ချက်
ƒ/2.2 အလင်းဝင်ပေါက်တစ်ခု နှင့် နှစ်လုံးတွဲ LED ဖလက်ရ်ှမီးတစ်ခု ပါဝင်သည့် 13-megapixel ရှိသော အနောက် ကင်မရာသည် အလင်းပေးမှု ညံ့ဖျင်းလှသော အခြေအနေများတွင်ပင်လျှင် အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံများအား ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပေသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် တစ်ဆင့်ချင်း ခြေရာခံထောက်လှန်းမှု အော်တိုဖိုးကပ်စ်သည် အံဝင်ခွင်ကျမရှိသော ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှု အခိုက်အတန့်များကိုပင် ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှအပဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များအားဖြင့် အဆင့်မြင့်ထားသော 5-megapixel ရှိသည့် အရှေ့ကင်မရာမှာမူ သင်၏ ဆဲလ်ဖီ ရိုက်ကူးမှုများအား အစဉ် ကြည့်ကောင်းလှပနေစေမည်မှာ အသေချာပင် ဖြစ်သည်။
သင့်ဖုန်းအား သင် လော့ခ်ဖြုတ်ဝင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ရှုပ်ထွေးလှသော လျှို့ ၀ှက်စကားလုံးများအား ရိုက်သွင်းနေရန် လိုအပ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ မြန်ဆန်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ဗွေရာ အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် U20 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ mTouch လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ပါဝင်ပေသည်။
U20 တွင် ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ဘ၀နေထိုင်မှုတစ်ခုအတွက် သင် လိုအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများ အားလုံးအား ချောမွေ့စွာ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက်ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုးတက်ဆောင်ရွက်မှုပြုထားသော Flyme စီမံလည်ပတ်မှုစနစ်လည်း ပါရှိပေသည်။
1. ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ပြသထားသည့်၊ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည့် အားလုံးသော ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ၊ စစ်ဆေးချက် ဒေတာများ၊ ဆောင်ရွက်ချက် စွမ်းဆောင်နိုင်မှု နှင့် အသေးစိတ် စံချိန်စံညွှန်းများတို့သည် ကိုးကားမှုပြုရန်အတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပြီး၊ အပြောင်းအလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပေသည်။ အားလုံးသော အချက်အလက်များသည် လက်တွေ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်တို့အပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
2. အခြားတွင် တခြားဖော်ပြထားသော အခြေအနေမှလွဲ၍ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ပေါ်ရှိ ဒေတာအချက်အလက်များ အားလုံးသည် Meizu ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်ဆေးချက်ရလဒ်များအား ကိုယ်စားပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသည့် အခြေအနေများလက်အောက်တွင် ဒေတာ အချက်အလက်များသည့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပေသည်၊ သို့ပါသဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား လက်တွေ့ ကိုယ်ပိုင် တွေ့ကြုံခံစားရမှုအပေါ်တွင် အမှီပြုရန် လိုအပ်ပေသည်။